The 9 Best Hotels of Istanbul in 2018
Jereo ny soso-kevitrao ambony indrindra amin'ny toerana hijanonana rehefa mitsidika ny tanànan'i Torkia lehibe indrindra
Niparitaka tamin'ny arabe Bosphorus i Eoropa sy Asia, i Istanbul no toerana fivoriana ara-bakiteny tany Atsinanana sy Andrefana. Tsy azo ihodivirana fa tanàna iray misy fifanoheran-kevitra mampihetsi-po. Ao amin'ny saikin-tsarety Sultanahmet, nosoratan'i Constantinople (renivohitry ny empira romanina sy Byzantine) ny fisehoan'i Constantinople fahiny teo aloha, dia hita ao amin'ny fanangonam-bokatr'ireo moske taloha sy ny fiangonana ortodoksa. Ny distrika ara-barotra Levent, etsy ankilan'izany, dia tanàna maoderina maoderina ao amin'ny foiben-toeran'ny orinasa, trano fisakafoanana manan-danja sy trano fandraisam-bahiny. Na aiza na aiza alehanao, eto dia ny fisafidianantsika ny trano fialan-tsasatra any Istanbul, manomboka amin'ny trano fialan-tsasatra mora vidy sy mahafinaritra ho an'ireo hotely misy kintana dimy.
Ny hotely White House no nanolotra ny lisitr'ireo lisitr'ireo hotely any Istambul ho an'ny 2017. Maro be ny firaiketam-pony, fa ny vahiny kosa tia indrindra io safidy efatra karazana io ho an'ny serivisy tsy misy dikany sy fandraisana aterineto. Eo afovoan-tanàna ao an-tanànan'i Old, ny trano fandraisam-bahiny dia lalana dimy minitra avy ao amin'ny Museum Hagia Sophia. Tahaka ny tanàna mihitsy, dia mamelatra ny Atsinanana sy ny Tandrefana amin'ny endrika fasika romana sy haingam-poko Ottoman. Isaky ny efitrano 22 ao amin'ny hotely, dia andrasana ny kitapo misy ravin-kazo, ny kitapo azo itokisana ary ny mofomamy malefaka, ny peach, ary ny loko volamena.
An-trano fanatobiana dia misy Wi-Fi maimaim-poana, TV LCD, ary minibar. Na izany aza, ny toeram-ponenana an-tampon-trano tsy misy ifandraisany amin'ny hotely. Izy io dia manomana seza any ivelany sy ivelan'ny trano miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana momba an'i Hagia Sophia, ny Moske Blue, ary ny Bosphorus. Eto dia mankafy buffet misotro ronono matsiro ianao ary ny fomba fijery masoandro tsy hay hadinoina isaky ny hariva. Na dia tsy manana trano fisakafoanana manokana aza ny Trano Fotsy, dia misy safidy maro eo akaiky. Ny serivisy momba ny serivisy dia azo alaina amin'ny famantaranandro
Hotel Niles dia fivezivezena avy amin'ny hustle sy ny tratran'ny Grand Bazaar malaza. Raha ny marina dia maro amin'ireo tanàna tsara tarehy ao an-tanànan'i Old City no afaka mandeha lavitra eny (afaka mamonjy amin'ny fitateram-bahoaka). Na eo aza ny toerana misy kintana dimy, ny hotely Niles dia tena lafo be. Ao anatiny, dia tian-koditra amin'ny fandrahoan-tsakafo Tiorka tamin'ny taonjato faha-19, manomboka amin'ny tehezan-tsakitera manankarena amin'ny felam-boninkazo. Misafidiana efitrano, efitrano na trano fandraisam-bahiny vao navaozina, izay ahitana ny rivotra rehetra, ny TV satelita ary ny fidiovana malalaka.
Na dia ny trano tokana misy tokantrano tokana sy avo aza no mora indrindra, ny trano fialan-tsasatra toy ny Wi-Fi sy ny sakafo maraina dia mety hamela anao hahazo vola ampy hanamboarana toetoetran'ny Ottoman atmosfera. Ny sakafo maraina dia atolotra eny an-tampon-trano eny ambony tafo, izay manam-piniavana ny Ranomasina Marmara tsara tarehy. Ny trano fandraisam-bahiny dia fantatra amin'ny alahelony ho an'ny Tiorka tena izy (eritrereto ny dite pòm, cheese ao an-toerana, yoghurt ary oliva). Ny sehatra ho an'ny daholobe hafa dia misy efitrano fanatanjahantena sy trano fisakafo miaraka amin'ny loko menaka sy trano fantsom-pokonolona mahandro.
Safidy lehibe iray hafa ao amin'ny distrikan'i Sultanahmet manan-tantara, ny Hotel Ibrahim Pasha dia ahitana trano ratsin'ny trano faha-20 tamin'ny taonjato faha-20 izay naorina teo ambany alokalon'ny mosquée Blue. Eritrereto ny endriky ny zavakanto ankehitriny izay misy tsiranoka tiorka tsizarizary ary hampitomboina amin'ny tolotra fakan-tahaka manokana. Ny trano fandraisam-bahiny dia efitrano 24, anisan'izany ny TV satelita sy ny efitra fandraisam-bahiny miaraka amin'ny orana orana sy ny fananan'i Molton Brown. Ny fanamainana ambanin'ny tany dia tsara indrindra amin'ny ririnina.
Ho an'ny toerana kely fanampiny, misafidy Deluxe Room miaraka amin'ny faritra miavaka. Misy buffet maimaim-poana maotina maimaim-poana any amin'ny toeram-pisakafoana mahafinaritra, ary raha tsy misy trano fisakafoanana eo an-toerana dia afaka manoro hevitra momba ny toeram-pisakafoanana mendrika any amin'ny faritra akaiky ny kardinaly mahay. Manaova bokotra tsara amin'ny kitapo ao amin'ny trano famakiam-boky na mankany an-tampon-trano eny ambony tafo ho an'ny fijery mahatalanjona momba ilay moske Blue Blue tamin'ny alina.
Tonga lafatra ho an'ny fianakaviana manokan-tena, ny Suites Sultanahmet dia ahitana trano 11 izay niparitaka nanerana ny trano efatra izay misy ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fifaninanana manan-tantara. Ny fahitana an'i Istanbul ambony tahaka ny Hagia Sophia sy ny Grand Bazaar dia mora azo - na ho an'ny tongotra kely aza. Anisan'ireo efitrano fametrahana ny efitrano fitsangatsanganana misy efitrano roa miaraka amin'ny fandriana roa, efitrano fandraisam-bahiny ary toerana fisakafoanana, izay misy tononkalo tiorka miloko.
Ny Wi-Fi maimaim-poana dia mampiadana ny ankizy zokiny indrindra, fa ny trano fandroana maoderina dia mamela anao hamonjy vola amin'ny alàlan'ny fikarakarana tena. Ho an'ny fianakaviana lehibe kokoa, misy fifandraisana misy efitrano misy. Rehefa tsy mahatsiaro mahandro sakafo ianao, dia manomana sakafo tsotra ny Café Sfendon mba hahafa-po ny rehetra. Ny fitantanana 24 ora ao amin'ny hotely dia afaka manamboatra fanasan-damba, fivarotana fivarotana sy fivarotana seranam-piaramanidina, ary misy fiara mijanona eny an-toerana. Afaka mijanona ao amin'ny efitrano fanatanjahantena ihany koa i Neny sy i Dada.
Eo anelanelan'ny Bosphorus sy ny Moske Blue, ny Hotel Empress Zoe dia miorina ao amin'ny tantaran'i Istanbul. Ny tranon'ireo trano mimandam-borona malaza ao Zébusy dia manadino ny faharavan'ny trano fandroana tamin'ny taonjato faha-15. Ao anatiny, manamboatra singa voajanahary vita amin'ny hazo sy vato ny zavakanto miaraka amin'ny asa soratra Islamika tany am-boalohany. Misy efitrano 25 sy efitrano tsy misy fepetra tsy misy fepetra, izy rehetra miaraka amin'ny aterineto sy ny fanamafisana afovoany mandritra ny fialan-tsasatra amin'ny ririnina.
Mandritra ny fotoana manokana, mitsambikina ao amin'ny Penthouse Suite. Eto ianao dia mahita dobo roa mahavariana, maramara amboaram-barim-barotra maramara ary tranobe tsy miankina iray miaraka amin'ny fomba fijerin'ny mosque Blue Mosque. Ny sakafo maraina maimaim-poana dia atao ao amin'ny saha eo anelanelan'ny loharano, voninkazo ary ny haitao taloha. Ny tranobe an-tampon-trano dia manolotra ny Ranomasin'i Marmara panoramasiana ary ny fisotroana hariva dia atolotra ao an-jaridaina na ao anaty am-patana.
Raffles Istanbul dia manakaiky ny mpivarotra amoron-tsary sy ny Zorlu Center (toeram-pisakafoanana avo lenta) eo amin'ny lafiny Eoropeana ao Istanbul. Miandrasa ny trano maoderina maoderina, ny zavakanto amin'izao fotoana izao ary ny sasany amin'ireo efitrano lehibe indrindra ao an-tanàna. Ho an'ny trano fialantsasatra tsara indrindra, vakio ny efitrano Raffles Suite roa. Ny tombontsoa dia ahitana teratany tsy miankina iray miaraka amin'ny valan-tseraseran'ny Bosphorus, helikoptera na fizahantany yacht tsy miankina sy ny fisakafoanan'ny Chef Chef.
Ny trano fandraisam-bahiny dia manana safidy mampiavaka ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana, anisan'izany ny Rocca (malaza amin'ny sakafo Tiorka amin'izao fotoana izao); ary Arola avy amin'ny chef Michel Michel-malaza Sergi Arola. Misy horonantsary horonantsary misokatra eo an-tampon-trano, ary koa ao anaty dobo filomanosana sy dobo ivelany. Raffles Spa dia manolotra batisan-java-bolo sy masiaka mampihetsi-po. Misy andiana heliport, fiara mpamonjy fiara mpamonjy voina ary 24 ora Raffles Butlers dia mameno ny traikefa kintana dimy.
Eo amin'ny lafiny Eoropeana ao Pera cosmopolitan, ny Marmara Pera Hotel dia dingana vitsivitsy avy amin'ireo pubs, trano fisotroan-dronono, trano fisakafoanana ary toerana fialamboly ao an-tanànan'i Istiklal malaza. Manomboka ny fetin'ny hariva ao Mikla, trano fandraisam-bahiny trano fisakafoanana. Eto dia azonao atao ny mankalaza ny fankalazana ny Anatolea anio, raha mihinana cocktails amin'ny lamaody sy manintona ireo kintana Golden Horn vistas. Amin'ny ririnina, ny antoko dia mihetsika midina mankany amin'ny Café Marmara, toerana mahazendana ho an'ny divay tsara sy sakafo a la carte. Ny efitra fisakafoana sy ny efitranony dia manolotra fanangon-doha mialoha ny antoko (toy ny minibar ary ny doka iPod), raha maimaim-poana Wi-Fi, televiziona 32 sy ny trano tsara tarehy kinga dia mampivelatra kely ny fety. Ny fanamafisana hafa dia ahitana ny klioba ara-pahasalamana sy ny dobo filaminana tafio-drivotra.
Ho an'ny toerana azo itokisana any amin'ny foibe ara-barotra iray any Istanbul, mifidiana Wyndham Grand Istanbul Levent. Ny trano fandraisam-bahiny dia manana efitrano 23 ahitana toerana ho an'ny solontena 1.200. Ampitao amin'ny efitra iray misy fidirana an-tariby avy any ivelany ary ankafizo maimaimpoana maimaim-poana any amin'ny toerana malalaka manokana ho an'ny fiasana na fifandraisana amin'ny mpiara-miasa. Ny efitrano rehetra dia miantoka ny torimaso tsara amin'ny alim-borona sy ny lambam-baravarankely. Ny tsara indrindra, Wi-Fi dia haingana sy maimaim-poana. Misy barazy sy toeram-pisakafoanana maromaro, fa ny dobo amorom-patana sy spa dia mamela anao hiala ao an-trano.
Ny trano fialantsasatra mafana sy fandraisana andraikitra dia manome safidy sarobidy ho an'ireo olona any an-tsambo akaikin'ny Hagia Sophia sy ny Park Gülhane any. Ny safidin'ny efitrano isan-karazany ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia avy amin'ny efitrano fandriana maromaro ho an'ireo efitra roa, efitrano telo ary efitrano fianarana. Hahazo tombony amin'ny fanamafisam-peo sy ny rivotra iainana, ary ny lambam-pandriana sy ny fitaovana ampiasaina. Mizara ny trano fanasana, fa ny sakafo maraina dia maimaim-poana ary maimaimpoana maimaim-poana ao amin'ny efitrano malalaka iombonana. Wintergarden Panoramic Terrace Bar dia fampisongadinana, miaraka amin'ny fijery lehibe any an-tanàn-dehibe, fiompian'ny atmosfera sy bar iray ho an'ny cocktails ho an'ny tenany amin'ny hariva.
Ny Penis Rocks any Torkia
Tsia, Tsy misy Rosiana mainty any Torkia
Ahoana no hividianana tapakila Tiorka
Ny tanànan'i Batman ao Torkia
Ireo traikefa premium tany amin'ny Disney World
Memphis 'tsara indrindra sy trano fisakafoanana miaraka amin'i Patios
FANAMARIHANA: Spa Bellagio
Lisitry ny olona malaza avy any Peru
Supermarkets any San Diego: aiza no ahazoanao ny fivarotana?
The 7 Best Credit Cards amin'ny 2018
Legoland ao Billund, Danemark: The Legoland Original
Lex Luthor: Lozam-pifamoivoizana amin'ny sigara enina fahagola
Fomba hanomezana famandrihana amin'ny Summerlicious
Ny vaovao momba ny sambo Cruiseur Holland America Eurodam